Levitika 24 - Ny Baiboly
Levitika toko 24
Didy momba ny jiro sy ny mofo alahatra - Sazin'ny mpanevateva ny anaran'Andriamanitra - Lalàna momba ny valim-bonoana.
1Ary niteny tamin'i Moizy Iaveh nanao hoe: 2Omeo didy ny zanak'Israely hanatitra aminao diloilo madio avy amin'ny oliva voatoto, hamelomana ny jiro lalandava. 3Aarona no hamboatra azy, eo ivelan'ny efitra lamba, anoloan'ny vavolombelona, ao an-trano lay fihaonana, mba hirehetany lalandava eo anatrehan'ny Tompo, hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina. Lalàna tsy tapaka ho an'ny taranakareo izany. 4Halahany eo amin'ny fanaovan-jiro volamena madio ny lalampy ho eo anatrehan'ny Tompo lalandava.
5Haka lafarina tsara indrindra hianao ka handrahoanao mofomamy roa ambin'ny folo, samy ho roa ampahafolon'ny efah avy ny mofomamy. 6Hapetrakao mifanongoa amin'ny antontany roa ireo, enina isan-antontany, eo ambonin'ny latabatra volamena madio, eo anatrehan'ny Tompo. 7Hasianao emboka madio eo ambonin'ny isan'antontany avy, ho fahatsiarovana, eo ambin'ny mofo atolotra amin'ny afo ho an'ny Tompo. 8Halahatra tsy tapaka isan'andro sabata ireo mofo ireo avy amin'ny zanak'Israely, eo anatrehan'ny Tompo: fanekem-pihavanana maharitra lalandava izany. 9Ho anjaran'i Aarona sy ny zanany, ireo; ary eo amin'izay toerana masina no hihinanany azy, satria zava-masina dia masina ho azy ireo izany amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'ny Tompo. Lalàna maharitra lalandava izany.
10Nisy zanakalahin'ny vehivavy Israelita anankiray, nefa zanaky ny lehilahy Ejipsiana, nankeo afovoan'ny zanak'Israely: ary nifampila kisa teo an-toby ny zanakalahin'ilay vehivavy Israelita sy ny lehilahy anankiray amin'Israely. 11Ny zanakalahin'ny vehivavy Israelita nanevateva ny Anarana masina sady nanozona; ary ny anaran-dreniny dia Salomita, zanak'i Dabrì, avy amin'ny fokon'i Dana; 12ka nambenan'ny olona izy mandra-pilaza amin'izy ireo ny tenin'ny Tompo. 13Dia niteny tamin'i Moizy Iaveh nanao hoe: 14Asaovy mivoaka ny toby ilay mpanevateva, ka aoka hametra-tànana eo ambonin'ny lohany izay rehetra nandre azy, dia aoka ny fiangonana rehetra hitora-bato azy. 15Ary hiteny amin'ny zanak'Israely hianao hanao hoe: Izay rehetra manozona ny Andriamaniny, dia hilonjy ny helony; 16ary izay manevateva ny anaran'ny Tompo, dia hohelohin-ko faty, ka hitora-bato azy ny fiangonana rehetra. Na vahiny, na tompon-tany, rahefa manevateva ny Anarana masina dia ho faty.
17Izay mamono mahafaty olona, dia hovonoin-ko faty. 18Izay mamono mahafaty biby fiompy, dia hanonitra hoatra azy: aina solon'ny aina. 19Izay mandratra ny namany, dia hasiana toraky ny nataony: 20tapaka efain-tapaka, maso efai-maso, nify efai-nify, izay ratra nafitsony ny namany dia mba afitsoka azy koa. 21Izay mahafaty biby fiompy hanonitra hoatra azy; fa izay mahafaty olona kosa, dia hatao maty koa. 22Hofehezin'izany lalàna iray izany avokoa hianareo na vahiny na tompon-tany, fa izaho no Iaveh Andriamanitrareo. 23Nony voalazan'i Moizy tamin'ny zanak'Israely izany, dia navoakan'izy ireo ilay mpanevateva, ka notorahany vato. Notanterahin'ny zanak'Israely ny didy nomen'ny Tompo an'i Moizy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1287 seconds